Nezvedu - Qingdao Xinmao ZT Steel Co., Ltd.
Qingdao Xinmao ZT Steel Kuvaka Co., Ltd.ari zvachose-muridzi chikamu kubva Qingyun Xinmao Steel Structure Co., Ltd. iyo rakaumbwa muna June 2003 pamwe fekitari nzvimbo anopfuura sms 50,000. Iyo kambani ine vashandi makumi mana nevatanhatu, mainjiniya makumi mana, kusanganisira gumi nevaviri vagadziri, makumi maviri neshanu ouinjiniya nevashandi vehunyanzvi.
The kambani ane zvakakwana maindasitiri nengetani injiniya Consulting, urongwa pamasikiro, kugadzirwa kubudiswa, kuvaka, chirongwa kugamuchirwa. The zvigadzirwa zvinonzi nevakawanda kushandiswa panzvimbo mumawekishopu, dzokuchengetera, pazviteshi, 4S inoratidzirwa dzimba uye zvichingodaro. Zvigadzirwa simbi Chimiro nezvivakwa uye mudziyo dzimba vari zvakanaka nokugamuchirwa mudzimba uye vatorwa vatengi, kwete nevanhu mudzimba chete, uye aivigirwa kuBangladesh, Indonesia, Israel, Nigeria, Sri Lanka, Philippines, Mozambique nedzimwe nyika uye kumatunhu.
Maererano zvinodiwa chigadzirwa zvakaisvonaka, kambani akasuma yemhando inogadzirwa mitsetse nokuti akaramba utsanzi uye chigadzirwa kukura. Pari tine vanopfuura 10 kugadzirwa mitsetse, kufanana CNC murazvo kucheka kugadzirwa mutsetse, C-chikamu simbi kugadzirwa mutsetse, H-chikamu danda boka, musuo anyatsofukidzwa chinhu chakakombama Welding kugadzirwa mutsetse, Sandwich ndiro kugadzirwa mutsetse, akatakura Plate dzaFord etc.
We vanoomerera ari professionalization mishonga, large- pamwero kugadzirwa uye pakatanga michina mitsva. "Unhu kuvaka zvakaisvonaka, anofunga uye akangwarira vatengi" achava chinangwa chedu. Tinotarisira kuvaka ramangwana nani vatengi.